Momba anay - Arex Industrial Technology Co., Ltd.
Varingana vita amin'ny fingotra
Varingana vita amin'ny kodiarana ho an'ny kamio
SAG / AG / Ball / Rod fikosoham-bary
Tady vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy
Tube malefaka malefaka
Pipe vy milahatra polyurethane
Sodina milahatra vy
Haino aman-jery Screen Vibrating
Polyurethane lamba lamba tsara
Media momba ny sivana polyurethane
Fampahalalam-baovao momba ny fingotra
Ireo mpiorina mitafy flotation
Ruby Rotor & Stator
Manafoana ny sendika
Fantsona metaly mora azo
Fitambarana fanitarana metaly
Fifanarahana fanitarana fingotra
Ireo singa Hydraulika
Filter Fitaovana Press
Manaova Pads Track Resistant
Fehin-kibo sy kodiarana
Namboarina ho an'ny faritra vita amin'ny fingotra sy plastika
Arex Industrial Technology Co., Ltd.
Orinasa teknolojia indostrialy Arex dia hita tamin'ny 1995, izy io ho toy ny mpamatsy indostrialy mahaleo tena mitarika. Hatramin'ny niarahanay niasa tamin'ny orinasa manerana an'i Sina mba hanomezana fifandraisana matanjaka amin'ny mpamatsy. Ny natomboka tamin'ny asa fanamboarana masinina kely miaraka amin'ny vina hanampiana ny hafa hahomby sy ny faniriany hanohana ny indostria, dia nitombo niaraka tamin'ny ekipa natokana hanitatra sy hanompo amin'ny fomba vaovao, tsara kokoa sy samy hafa. Indrindra indrindra, i Arex dia misolo tena ny orinasa Baytain rubber sy plastika mihazakazaka amin'ny orinasa iraisam-pirenena ary izy io dia varavarankely tokana mankany amin'ny varotra manerantany. Baytain amin'ny maha-mpanamboatra teratany vokatra vita amin'ny fingotra sy plastika any Shina manodidina ny 30 taona, izay manampahaizana manokana amin'ny famatsiana vokatra azo anaovan-tena amin'ny fitrandrahana. Ireo orinasa roa ireo dia an'ny filankevi-pitantanana iray. Ny loharanom-pahalalana rehetra dia zaraina. (Mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba Baytain: www.baytain.com)
Arex dia mpanamboatra, mpivarotra, mpanamboatra, masininina, mpanafatra ary mpaninjara ireo akora indostrialy, fitaovana ary filàna sy filàna indostrialy hafa. Manana tombony amin'ny fiaraha-miasa tsara amin'ireo mpanamboatra premium hafa izahay izay manompo miaraka amin'ny faritra maro samihafa any Shina mandritra ny fotoana maharitra. Voaporofo fa tsy ny filana voalaza etsy ambony ihany no voamarina fa afaka manome fepetra hafa mifandraika amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny mekanika. Manana fahatakarana lalina momba ny filan'ny mpanjifa sy ny indostria ary ny fanamby izahay. Mieritreritra mialoha hatrany amin'ny famahana olana mavitrika sy ny fanafoanana ny fahasarotana isika ary mikendry ny tsy hamela ny mpanjifantsika hisalasala mihitsy. Mampifandray ireo matihanina amin'ny indostria miaraka amin'ny marika malaza eran'izao tontolo izao, izahay dia manome sy manome vokatra goavambe, plastika ary vy feno ho an'ny tanjon'ny indostria sy ny fitrandrahana. Tamin'ny alàlan'ny torohevitra momba ny fampiharana ara-teknika anay sy ny vahaolana fitantanana fitantanana feno dia nahazo ny fahatokisana sy ny fanohanan'ny orinasa maro manerantany ho an'ny orinasa mpitrandraka sy ny indostria mifandraika amin'izany izahay.
FIASA sy fiaraha-miasa
Arex dia mamorona fiaraha-miasa maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny famoronana sy fanolorana vahaolana manokana mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa tsirairay. Miara-miasa amin'ny mpanjifanay amin'ny fananganana vondron'olona mandroso sy salama ary maharitra.
Izahay dia tsy mihevitra ny tenanay ho mpamatsy hafa fotsiny satria tsy izany fotsiny no asehontsika; mpiara-miasa izahay, ary manolo-tena hanatsara ny dia. Natao ny fisakaizana ary natsangana ny fifandraisana - Miara-miasa, mandresy miaraka ary miara-mankalaza.
Ao amin'ny dingan'ny fampandrosoana dia nifanakalo sy niara-niasa tamin'ny sampana iraisam-pirenena maro sy andrim-pikarohana i Arex. Nanampy anay tamin'ny fanatsarana ny endrikay, ny famokarana, ny fikojakojana, ny asa aman-draharaha ary ny fanabeazana. Fampiroboroboana ny Arex ho an'ny orinasa laharana voalohany manerantany ho an'ny vokatra vita amin'ny fingotra sy vokatra polyurethane, izay mety amin'ny marika misy milina fanomanana rehetra any amin'ny faritra fitrandrahana.
NY MISIONA ANTSIKA
Ny indostrian'ny Arex dia mifantoka amin'ny fahazoana ny hatsarana amin'ny famolavolana, ny fanamboarana ary ny famatsiana vahaolana azo antoka ary tsy azo harafesina, singa ary mifandraika amin'ny fitaovana fanomanana fitrandrahana. Manome vahaolana vita amin'ny kofehy manokana sy vahaolana polyurethane izahay ho an'ny fitrandrahana sarotra sy ny fampiharana indostrialy izay mila fomba vaovao. Matoky izahay fa ny kalitaon'ny vokatra sy ny vidin'ny fifaninanana dia hisy fiatraikany amin'ny mpanjifa. Ny tanjonay dia ny ho tonga mpanamboatra tsara indrindra anao ho an'ny vahaolana amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy indostrialy.
Ny vinan'i Arex dia ny loharano azo itokisana, manam-pahaizana manokana amin'ny vahaolana vita amin'ny fingotra manokana ary vahaolana polyurethane eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana sarotra sy ny indostria eto amin'izao tontolo izao.
Andao esorintsika ny fihenjanana sy ny olana amin'ny tahiry azo ampiasaina. Ny fizotran'ny fanavaozana anay dia manamboatra sy manara-maso tsotra ny tahiry.
Mifandraisa amin'ny mangarahara tanteraka, mientanentana izahay fa ny fifandraisana matanjaka dia mahatonga ny fifandraisana mahomby.
Fantatray fa mila valiny haingana ny mpanjifanay, mailaka sy mavitrika amin'ny valiny izahay.
Fa maninona no voafetra? Manokana fotoana hividianana izay tena ilainao izahay.
Avelao izahay hanampy anao! Mirehareha amin'ny fananana ireo manam-pahaizana momba ny indostria eto an-tanana izahay hitady vahaolana mety isaky ny mandeha.
ADDRESSRoom 505, D-block, MCC Grand Plaza, Jianhua Street, Distrikan'i Yuhua, Shijiazhuang City, Faritanin'i Hebei, Sina
Fotoana niasana08:30 ~ 17:30 Moday hatramin'ny Sabotsy